Get Involved - Open Hluttaw
ပွင့်လင်းလွှတ်တော်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပိုပြီး မြန်မြန်အကောင်အထည်ပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ သင့်မှာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကို ရှိပါသလား? သို့မဟုတ် ဒီအချက်အလက်တွေကို စုစည်းပြုစုတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ထဲမှာ ပါဝင်လိုပါသလား? contact@openhluttaw.org ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီး အသိပေးနိုင်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းလွှတ်တော်ဝက်ဘက်ဆိုက်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေမှားယွင်းနေရင် ဒီပုံစံ ကို ဖြည့်ပြီးပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မယ့်အခြားနည်းလမ်းတွေကိုလဲ မကြာခင်မှာ ထပ်မံအသိပေးကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပှငျ့လငျးလှတျတျောရဲ့ လုပျငနျးတှကေို ပိုပွီး မွနျမွနျအကောငျအထညျပျေါစခေငျြတယျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ပါဝငျပူးပေါငျးနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှလေညျး အမြားကွီးရှိပါတယျ။ သငျ့မှာ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျတှရေဲ့အခကျြအလကျတှကေို ရှိပါသလား? သို့မဟုတျ ဒီအခကျြအလကျတှကေို စုစညျးပွုစုတဲ့ ဆောငျရှကျခကျြထဲမှာ ပါဝငျလိုပါသလား? contact@openhluttaw.org ကိုအီးမေးလျပို့ပွီး အသိပေးနိုငျပါတယျ။
ပှငျ့လငျးလှတျတျောဝကျဘကျဆိုကျပျေါမှာ ရှိနတေဲ့လှတျတျောကျိုယျစားလှယျတှရေဲ့အခကျြအလကျတှမှေားယှငျးနရေငျ ဒီပုံစံ ကို ဖွညျ့ပွီးပွငျဆငျပေးနိုငျပါတယျ။
ပူးပေါငျးပါဝငျနိုငျမယျ့အခွားနညျးလမျးတှကေိုလဲ မကွာခငျမှာ ထပျမံအသိပေးကွညောသှားမှာဖွဈပါတယျ။